कोरोना संक्रमणपछि उपचाररत प्रधानन्यायाधीश राणाको अवस्थाबारे अस्पतालबाट आयो यस्तो खबर — Sanchar Kendra
काठमाडाै‌ । कोरोना संक्रमणपछि उपचाररत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
राणा कोरोना पोजेटिभ भएपछि सोमबार साँझ सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। अस्पतालका अनुसार राणाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर र सामान्य रहेको छ।
‘उहाँ भर्ना हुँदा जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य उस्तै छ, सामान्य छ,’ अस्पतालका प्रमुख एसएसपी डा. रूपक महर्जनले सेतोपाटीसँग भने। राणालाई कोभिडविरूद्धका औषधी चलाउन थालिएको छ।
यस्तै विश्व स्वास्थ्य सगंठन (डब्लूचओ) ले कोभिड भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको विश्वव्यापी जोखिम बढेको भन्दै सचेत रहन चेतावनी दिएको छ ।
डब्लूएचओले नयाँ भेरियन्टले केही क्षेत्रमा गम्भीर असर हुनेसमेत चेतावनी दिएको छ । डब्लूएच‍ओका प्रमुख टेड्रोसल घेब्रेयसेसले जोखिमबीच गरीब देशहरुले खोप लगाउनुपर्ने ‌‌आवश्यकता औल्याए । ‘कोभिड हामीबाट भागेको छैन्, बरु हाम्रैनजिक छ’भने ।
ओमिक्रोन भाइरस यसै महिनाको सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको थियो । यो भेरियन्ट कोभिडको यसअधि खतरा मानिएको डेल्टा भेरियन्टभन्दा बढी जोखिम भएको डब्लूएचओले जनाउँदै आएको छ । भेरियन्टबारे तत्कालै जानाकारी गराएको भन्दै दक्षिण अफ्रिकाको प्रश‌ंसा भएको छ । ‘ओमिक्रोनको म्युटेसन दर उच्च छ । तसर्थ महामारीबारे विश्व समुदायले बेलैमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नयाँ भरियन्टको जोखिम, यसको संक्रमण क्षमता र खोपसँग यसले कस्तो प्रतिकृया जनाउँछ भन्ने बारेमा विश्वभरका वैज्ञानिकहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘हामीममध्ये धरैले कोभिडको प्रभाव घटेको लागे जस्तो भए पनि वास्तवमा झनै जोखिम बढेको छ,’ उनले भने । । तर, नयाँ भेरियन्टबाट अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको उनले जानाकारी दिए ।
क्यानडा, बेलायत, पोर्चुगल, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, भारत र हङकङमा नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ । भेरियन्ट देखिएसँगै बेलायत, अमेरिका र युरोपेली युनियनका केही देशहरुले दक्षिण अफ्रिकामा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
त्यस्तै, जापानले पनि मंगलबारदेखि छिमेकी मुलुकहरुसँगको सीमा बन्द गरेको जनाएको छ ।
चर्चित तीन भारतीय डन त्रिभुवन विमानस्थलबाट प’क्रा’उ, को हुन् उनिहरु ?
मतदान गर्न जाँदै गरेका यादवको गाडीमाथि आ’क्रमण